एसपी विष्टको वहस सकियो, के आउँला आदेश? : निर्मला पन्त प्रकरण – Khabar Art Nepal
एसपी विष्टको वहस सकियो, के आउँला आदेश? : निर्मला पन्त प्रकरण
By खबर आर्ट नेपाल	 On ९ चैत्र २०७५, शनिबार ०३:३५
चैत ०९ कञ्चनपुर । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुर भीमदत्तनगरपालिकाकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टको बहस सकिएको छ ।
बालिका बलात्कार र हत्या प्रकरणमा यातना दिएको र प्रमाण नष्ट गरेको अभियोग लागेका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट गएको मंगलबार बयानका लागि आफैं अदालतमा उपस्थित भएका विष्ट थिए , उनीमाथिको थुनछेक बहस शुक्रबार सकिएको हो । बहस सकिए पनि समयाभावले आदेश भने आउन सकेको छैन ।
बहस सकिएसँगै आदेशका लागि समय अपुग भएकाले आइतबार बिहान १० बजे बोलाइएको जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका श्रेस्तेदार हरिकृष्ण अवस्थीले जानकारी दिएका छन् । उनले अदालतको आदेश नआएकाले विष्टलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको जिम्मा लगाइएको बताएका छन् ।
फरार रहेका ‘सीआइबी’ का तत्कालीन डीएसपी अंगुर जिसी भने अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । मुद्दाका प्रतिवादीहरु तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेटी, प्रहरी निरीक्षकद्वय एकीन्द्र खड्का, जगदीशप्रसाद भट्ट, प्रहरी नायव निरीक्षकद्वय हरसिंह धामी र रामसिंह धामी र प्रहरीजवान चाँदनी साउद यसअघि जिल्ला अदालत कञ्चनपुरबाट धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् ।
पहिलो दिनमै कोरियाका लागि ५५ हजार आवेदन दर्ता
पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ सबै पक्ष लाग्नुपर्ने